SAADAAL: Arsene Wenger Oo Magacaabay Labada Kooxood Ee Ugu Cadcad Ku Guuleysiga Champions League - Gool24.Net
SAADAAL: Arsene Wenger Oo Magacaabay Labada Kooxood Ee Ugu Cadcad Ku Guuleysiga Champions League
Tababarihii hore ee Arsenal ee Arsene Wenger ayaa magacaabay labada kooxood ee ugu cadcad ee ay midkood ku guuleysan doonto koobka Champions League ee xili ciyaareedkan.
Horyaalka naadiyada Yurub ee UEFA Champions League oo hakad galay bishii March ayaa Jimcaha dib u bilaabmaya, waxaana lagu furi doonaa kulanka adag ee Manchester City iyo Real Madrid ee garoonka Etihad Stadium kaas oo ah lugtii labaad ee wareegga 16ka.
Marka ay Sabtida iyo Jimcaha dhamaadaan kulamada wareegga 16ka ka hadhsan, waxay siddeeda kooxood ee iskugu soo hadhay oo afar ka mid ah haddaba lasii ogyahay ay u duuli doonaan waddanka Portugal oo ay wareegyada siddeeda, semi-finalka iyo finalku ka dhidi doonaan.
Ciyaarta ugu dambaysa ee finalka ayaa dhici doonta August 23, waxaana Arsene Wenger oo saadaaliyey uu magacaabay labada kooxood ee iskugu iman doona finalka ama ay midkood ku guuleysan doonto.
Tartanka ayay ku jiraan kooxaha Barcelona, Juventus, Bayern Munich, Real Madrid, Atletico Madrid iyo Chelsea, laakiin Arsene Wenger waxa uu tilmaamay in Manchester City iyo Paris Saint-Germain ay ugu cadcad yihiin, waxaanu yidhi: “Waxaan u malaynayaa inuu hoos u dhac ku yimid heerkii kooxaha Yurub ee aad iyo aadka u sarreeyey, waxaana ku jira laba ama saddex ugu wanaagsan Yurub.
“Aniga fikirkayga, Manchester City iyo Paris Saint-Germain ayaa ah labada kooxood ee ugu cadcad ee ku guuleysiga Champions League.”
Manchester City waxay haysataa faa’iido ay lugtii hore kasoo heshay oo ahaa in garoonka Santiago Bernabeu oo ay ugu tagtay Real Madrid ay kusoo garaacdayy 2-1, kulanka dambena uu ka dhacayo garoonkooda.
Laakiin PSG ayaa iska xaadirisay wareegga siddeedda iyagoo soo garaacay Borussia Dortmund.
Kani ma aha tobore wuxu fir3y3y gusha man city lkn muu firin kooxda real madrid inay tahay quwadii aduunka